Manchester City oo Xasuuqday Newcastle United,Una Soo Dhawaatay Chelsea “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester City ayaa garoonkeedq Etihad Stadium ku xasuuqda oo 5-0 uga badisay kooxda Newcastle United,waxana ay shan dhibcood u soo jirsatay kooxda Chelsea oo hogaamineyso horyaalka ingiriiska.
Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa daqiiqadii koowaad ee ciyaarta goolka koowaad ee ciyaarta oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Samir Nasri ayaa daqiiqadii 12-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Edin Dzeko ayaa daqiiqadii 21-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan David Silva ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta labada gool ee kale u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan Wilfried Bony ayaa dhamaadkii ciyaarta bedel ku soo galay,waxaana lagu bedelay ciyaaryahan Sergio Aguero.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga,waxana ay leedahay 55-dhibcood,halka kooxda Newcastle United ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 32-dhibcood.
Atletico Madrid oo u Soo Dhawaatay Kooxda Barcelona